बिहान मात्रै यौन सम्पर्क राख्नाले रक्त संचारमा सुधार - StarPratika.com
बिहान मात्रै यौन सम्पर्क राख्नाले रक्त संचारमा सुधार
सेक्स मानिसको जीवनको महत्वपूर्ण पक्ष हो । मानिसहरुले सेक्स गर्ने समय खासै ख्याल गरेको हुदैनन् । धेरैले रातको समयमा सेक्स गर्ने गर्छन् । तर पछिल्लो समयमा एक अध्ययनले बिहानिपख गरिने सेक्स प्रभाबकारी हुने निष्कर्ष निकालेको छ । बेल्फास्टको क्विन विश्वविद्यालयले गरेको एक अध्ययनले दाबी गरे अनुसार जुन दम्पतीले हप्तामा तीन पटक बिहानको समयमा यौन सम्बन्ध राख्छ । उनीहरु शारीरिक तथा मानसिक रोग लाग्नबाट धेरै मात्रामा बच्न सफल हुन्छन् । त्यसै गरी यो कुरामा पनि ध्यान दिनुस की यौन सम्पर्क एक किसिमको मनोराजनात्मक खेल हो । एकैचौटी खेल खेल्दा बढी थकित भइन्छ । त्यसैले यौन सम्पर्कको बेला कम्तिमा २० मिनेट सम्म बेड गेम खेल्नुपर्छ । जसले गर्दा दुवैजना तृप्त भइन्छ र सेक्सको मजा आउँछ ।
१. नियमित रुपमा बिहान मात्रै यौन सम्पर्क राख्नाले रक्त संचारमा सुधार आउनुको साथै उच्च रक्तचापमा कमी आउँछ ।
२. बिहान गरिने यौन सम्पर्कले टाउकोको एउटा भागतिर मात्र कडा पीडा हुने (माईग्रेन) रोग निको गर्नमा ठूलो मद्दत गर्छ ।
मेरो प्यारो सिन्धुपाल्चोक बोलको गितबाट गायक अमृतले हात पारे अवार्ड
युरोप यात्रामा गायिका कृष्णा परियार
पूर्व युवराज पारसले बाँडे राहत संगै माक्स र स्यानिटइजर